गिरिराज बाँस्कोटाको `ढुङ्गाको प्रेम´ - HongKong Khabar
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र १९, २०७८ समय: ०:०५:५७
पत्रकारितामा क्षमता खोजिरहेका बाँस्कोटा कवि पनि हुन। खोज पत्रकारिता गर्ने बाँस्कोटा घुम्न जन्मेका हुनकी लाग्छ। पूर्वी पहाडको कुनाकन्दरा, भिरपाखा, चौरी, खर्क, फुल , मानवीय कृयाकर्ममाथि लेन्स घुमाइरहेका हुन्छन। कहिले निकै विवादमा तानिन्छन।
फेदेनमा सालनाल गाढेर पान्थरे अन्नपानीले बनेको शरीर कुनै फेदेनी साहित्यिक कार्यक्रममा नदेख्नु उनको लेन्सले पान्थरे, इलामे ,झापाली पूर्वेली कविको तस्वीर खिचिक्क नगर्नु अचम्मै हुन्छ।
` ढुंगाको प्रेममा ´ सत्ताइस कविता छन । `बगिनेछ निरन्तर´आशावादी कविता हो। सुन्यबाट उठेर बाधा व्यवधान अडचन तोडदै बग्ने पानी जस्तो छ जिन्दगी । आँसु, दुखले कहाँ छेक्छ र जिन्दगी । माटो चिरेर उमृने पानी, काँडा बोकेर फुल्ने फुल जस्तो छ जिन्दगी । सुखी भन्दा खुशी हुनु भन्छन कवि। अलिक बढी आदर्शवादी छन। प्राप्ति भन्दा पुन्य जाती भन्छन । अनुभव भन्दा गणित कमजोर हुन्छ कविको दावी छ। प्राप्ती सपनाको परिणाम हो। पुन्य हिन्दु दर्शन हो। पुन्य हुनेले गर्ने हो। पुन्यले सपनालाई छेक्छ। कवि पुन्यले ईश्वर प्राप्ति चाहन्छन। विरोधाभास देखिन्छ। उठेर दौडन प्राप्ति चाहिन्छ। समृद्धि खास आर्थिक सामरिक समृद्धि हो। सामाजिक नैतिक त्यसपछि आउँछ। समृद्धिको आंशिक व्यबधान धार्मिक दर्शन पनि हो। गणित तथ्यमा आधारित हुन्छ। अनुभव भोगाईमा हुन्छ। भोगाई नै गलत भयो भने भोगाईको गणित स्वयं गलत हुन्छ। त्यसकारण गलत हुँदा गणित मात्र होइन भोगाइ पनि गलत हुन्छ। गणितीय गलतले समृद्धि सम्भव छैन। सुखी केमा हुने? खुसीको मापदण्ड परिवर्तित छ समयको ग्राफमा । कवि सोच्छ उसलाई प्रेम गर्नु भ्रम रहेछ। यो वैयक्तिक कुरा हो।
`ढुंगाको प्रेम´ कविता शिर्ष कविता हो। कवि आफ्नो प्रेमिकालाई साथमा लिएर पहाडी यात्रामा निस्किन्छन।प्रेमको निम्ति आगोसँग खेल्छन। नदि रुन्छ। गुफामा रात बिताउँछन। गोठाला साक्षी छ। प्रेमको यात्रालाई कवि क्रान्तिको प्रेम यात्रासित तुलना गर्छन। प्राकृतिक ढुंगाको सुन्दरताले प्रेमिका ढुङ्गा भै गएको। मानव प्रेम भन्दा प्रकृति प्रेममा अल्झी गएको निचोड छ कविको। ईश्वर
प्रकृतिमा प्रेमीका भुली गएको दुख छ कविलाई ! कवि इमानमा बाँचिरहेको छ । कविको उदारपनको प्रेममा सम्झना मात्र हात लाग्छ। नोस्टाल्जिक छन कवि। पहाडी सौर्न्दर्यको रसपान, भीरमौरी अवलोकन गुफा बिहार तोङबा सुकुटी सेवनले समाजलाई प्रेमको साक्षी किनारामा राखेका छन। प्रेममा सांसारिक भोगविलास पनि छ। अन्त्यमा प्रेमिकाको मन नफिरेपछि ढुङ्गा भएपछि कवि पनि ढुङ्गा भैगएका छ्न । पानी हुँदा न बोरा भिज्ने हो ! जवानी रहिन्जेलको प्रेम बाली रुङने बुख्याँचा भएको धारणा छ प्रेमिकाको। जीवन नै भ्रमले निर्मित रहेको विस्वास भ्रममा पणिरत भएको इलुजन छ । यो कविताको लेन्थ र घनत्वले कविको काव्य शक्तिलाई दर्शाउछ। आफू पनि पालुवा फेर्ने, रहर फेर्ने चुनौती छ कविको।
`समाजवादको यो यात्रा´ कविताले लोकतन्त्रमा पूरा गर्न नसकीएको प्रतिज्ञाबारे सम्झाएको छ। बेथिती, बिसङ्गती, अभाव ,गरिबी ,अपूर्ण स्वास्थ्य, प्रशासनिक सेवाबारे बोलेको छ। कविमा ज्वार छ। राजनैतिक समाजवादको निर्दिष्ट अवयवहरुबाट लोकतन्त्र विमुख हुँदै गएको भान छ। यो थोरै काव्यिक भैदिएको भए
अझ सुन्दर हुन्थ्यो।
`युद्ध र म´ कविता युद्धमा हिँडिगएको एक योद्धाले प्रेम र युद्धलाई जोखेर युद्ध प्रेम भन्दा महान छ। बाँचे
प्रेमी हुने मरे सहिद पीर नमाने हुन्छ भन्छ। युद्ध मानिसको बाध्यता हो रहर होइन भन्छन कवि। कवि ज्यादै आदर्शवादी भावुक भैगएका छन। सुन्दर, काव्यिक, बिम्बात्मक, प्रतिकात्मक पंक्तिले सुसज्जित छ।
`कावेली´ कविता, लिम्बुवानी सभ्यताको श्रोत कावेली नदिको विहङ्गम महिमा छ। कवि यति भावुक भै गएका छन। बिम्बात्मक अनुभुतिमा कावेलीलाई भावनाको गहिराइमा डुबाएका छन। शिल्प शैलीले काव्यात्मक छ। महिमाको मखमली ओढने ओढाएका छन।
`अन्तिम कप कफी ´ एक कप कफी पिउँदाको आत्माको समवेदनालाई कवितामा उतारेका छन।भावनात्मक बतासको झोंका छ। स्थानिक सुम्हालुङ साक्षी छ। एक झुलुक हेराईले निर्माण गरेको हृदयको गहिराईको नाप छ कवितामा। आफैलाई यादहरुको जङ्गलमा छोडेर हिडछन कवि।
` सम्झौटोको स्वर´ कविता अर्को प्रेम कविता हो।बालुवाले पिठिउँ माडेको ,असारमा हिलो खेलेको,
लिङ्गेपिङमा अन्ताक्षरी खेलेको, चिमटेको, ग्राम्य विम्बहरुको प्रयोगमा काव्यको रस निर्माण गरेका छन।
बदाम खाँदै प्रेमिल भएको, काउकुती लगाएको,
बालापनदेखिको नोष्टालजिक भावनाहरुको नदि छ। सँगै खेल्दै बस्दैमा जीवन प्रेमको भारी बोक्दैन। जीवनको मार्ग अलग हुन्छ नै।
`भगवानलाई पनि किन्ने´ कविताले ईश्वर आस्थाको केन्द्र हुन्छ, पैसाले खरिद गरिने निजि बस्तु होइन भन्छ।
`भविष्यतिर फर्किएका छौँ ´ आशावादि कविता हो।क्षितिज हेरेर उभिने आँट छ। सपना लुटनेहरुसँग मर्मत गरेर अभावहरु बढनु छ अघि। सब चीजबाट हारेर पनि त्याग्नु छैन सपनाको बाटो।
`पृथकता´ कविताले स्थानिकताको सौर्न्दर्य नै अरुबाट फरक देखाउने चीज हुन जुन अरुसँग नहुन सक्छ भन्छ। ग्रामीण जीवनको रम्यतालाई अदभूत प्राप्ती मानेका छन। महिलालाई गोठबारी घरकै घेरामा सुन्दर देख्नु चाहिँ पुरुषवादको अपेक्षित दृष्टि पनि हो कि। महिलाको बाहिरी सौन्दर्य र सहरिया सभ्यतालाई स्थानिक किसानी घरैया क्रियाकलाप र उत्पादनसँग तुलना गरेर कम सौर्न्दर्य कम महत्वपुर्ण भन्छन कवि। कवि बढी आदर्शवादी पुरातन चैतन्यको मोहमा जकडिएको भन्न सक्छन। स्थानिक सौर्न्दर्य , ग्राम्य परिवेश आफैमा महान र उच्च छ तथापि यसको आफ्नै सिमा पनि छ। समकालीन पुरुषको सहरिया जीवनप्रति कवि मौन छन। पुरुष चाहिँ ठिक हो भन्ने बैचारिकी छ।
कविले स्वार्थ राजतन्त्र र गणतन्त्रको होस भनेबाट गणतान्त्रिक मुलुकमा राजतन्त्र हुँदैन र यी स्वार्थसँगको गणतन्त्र खोजेको होइन भन्ने हेक्का कविमा नभएको देखिन्छ। राजतन्त्र फालिसकेको बेला यसको स्वार्थ सर्बथा अनुचित भएको प्रमाणित भएको बेला कविले किन यो सन्दर्भ जोडे उदेक लाग्दो छ। प्रश्न उठन सक्छ उनी माथी। गरिबसँग हारेको भन्ने प्रसङ्ग छ। को हारयो र गरिबसँग ? गरिबीसँग होला गरिबहरु हारेर नै यो गति छ। ग्राम्य जीवन नस्विकार्ने सहरिया तरुनीसित प्रेम बहिष्कार गर्ने कवि परम्परावादी भावनामा बग्ने आधुनिकता अस्विकार गर्ने रुखो सुखो ग्रहण गर्ने अपरिवर्तित बैचारिकीको पृष्ठ पोषक देखिन्छन। जो परिवर्तनको बाधक पनि देखिन्छ। तथापि उ सांस्कृतिक परम्परावादी, रुढवादी ,प्रकृतिवादी समेत प्रतीत हुन्छन। यो धारणा उत्तरवर्तिको ग्लोबलाइजेसनको अस्विकार पदावलिबाट प्रभावित देखिन्छ जो आलोचित सांस्कृतिक चिन्तन हो। चप्पल धेरै अघि विकास भएको हो नलाउनु व्यक्तिगत रुढता वा ऐच्छिक हो। त्यो बेलाको इच्छाको वा पहुँचको समाज शास्त्रको सामाजिक दुनियाँ मात्र हो। त्यो चेतना अरुमा लादनु स्वतन्त्रताको बर्खिलाप हो।पुँजीवाद खुला अर्थतन्त्रको अस्विकार हो। कवि हिडदैन उभिरहन्छ। बरु फर्केर अध्याँरो भित्र छिर्छ।
ढुङ्गाको प्रेम होनि त ।
`सम्झनाको कथा´ कविताले सम्झना, कागज झैं च्यात्तिएको रहेकाहरू पनि कथा भै गएको सपनाहरू, रहरहरु पछि छोडिगएको भोगाईहरु, बदलिगएको सन्दकपुरको हिउँले सम्झनालाई बल्झाएको नमिठो नोस्टाल्जिया छ। आखिर जो बाँच्नु छ।
`अँध्यारो मै जुन टल्किन्छ´ कविताले सत्तामा आसिनहरुको नैतिक मूल्य च्युत भएपछि बिद्रोह सुरु हुन्छ।
`बिहानीको बात´ कविता आशावादी उदघोषले भरिएको निरुद्देस्य गन्तव्य चुम्न हिडिने यात्रा हो। पहिरोको ढुङ्गाले पनि पाउँछ अडिने ठाउँ । एउटा असीम विश्वास छ।
`बिरोधाभाष´ कविताले एक असल नागरिकको मनमा अन्याय विरुद्ध लडने कि रेमिटान्स भित्र्याउन अरब जाने एक जटिल मोडमा आफुलाई पाइरहेको देशको स्थितीको चित्र बोल्छ।
`जुनकीरीको गीत´ले हिमालको गीत खोज्नेलाई जिन्दगीको गीत गाउँन अभिप्रेरित गर्छन।
`ल्याम्पपोष्ट र भगेराको गीत´ले रुन भनेर हिँडेको अरुको आँसु देखेर आफ्नो आँसु लुकाएर फर्केको समय छ।खेतहरु परिश्रम पर्खेर बसेको तर समय पासपोर्टमा भविष्य खोजिरहेको यथार्थ छ।
`कथाहरुको संवाद´ले आफू बुद्ध हुन नसकेको न योद्धा हुन सकेको दोधारमा बाँच्नु परेको बाध्यता छ।
`र,तिम्रो लागि´ प्रेम र युद्धमा सब जायज हुन्छ भन्ने कविको धारणा पछिल्लो चिन्तन होइन। प्रेमी र योद्धाको स्वतन्त्रताको निजत्वको समेत स्थान हुन्छ।
`मौन मर्जी ´भावनाको उडानको मौन मर्जी छ।
`नयाँ वर्ष´कविताले नयाँ भन्नू सम्वत मात्र हो, मान्छेको दुख शोषण सपनाहरू परिवर्तित छैनन। वितृष्णा छ मानिसहरूमा।
कवि गिरिराज बाँस्कोटा
`सम्झनाको गोरेटो ´ प्रेमिको सम्झनाले मस्त समय हो।कवि ज्यादतर प्रेम गर्ने प्रेमलाई गन्तव्यसम्म लान नसक्ने असफल प्रेमी देखिन्छन। भावुक भै बस्ने भावनामा बाँच्ने प्रेम चरो लाग्छ। दुखिरहने चोट लाग्छ। चोटमा रमाउने नोस्टाल्जिक लाग्छ।
ढुङ्गाको प्रेम कठोरताको प्रेम हो। दृढताको प्रेम हो।रुढताको प्रेम हो। अपरिवर्तित समयको प्रेम हो। यो परिवर्तनको लागि कि बिस्फोटन चाहिन्छ कि महान कलाकार जो कविमा भावनाहरु मात्र छ। भावनाहरुले कुँदेर ढुङ्गामा कला भर्ने प्रयास छ कविको। परिवर्तन गर्ने असफल प्रयासमा कविको सपना पनि ढुङ्गा भै गएको छ। र,ढुङ्गालाई प्रेम गर्छ। कविको भावनाहरु बिस्कुन बनेको छ। अटेसमटेस छ। बिशृङखलित छ।
स्वैरकाल्पनिक उडान पनि लाग्छ। देवकोटाको स्वच्छन्दवादको मेहेरोलाई पक्रन जोडबल छ। कतै भावना र बिचारको घनत्व नमिलेर छताछुल्ल छ।केन्द्रीकृत गर्न असमर्थ भएर फुक्का भएका छन।विचारमा गहिराई नआई मुक्त छन। कुन्ठा आक्रोश प्रसस्त छ। वर्तमान राजनीतिशास्त्रसँग कवि खुस छैनन।
बैचारिक विचलन पनि छ। गणतन्त्र र राजतन्त्रको भेदलाई कविले अलमलमा राखेका छन।
किन यो भावना कविले आत्मसात गरयो। म छक्क छु।
हुन त नेपाल अधिराज्य भनेर भाषण गर्ने गणतन्त्रवादी वामपन्थीहरू र डेमोक्रेडसहरु भएको देशमा यो सामन्य हुन सक्छ। कविलाई मेरो काव्यिक शुभकामना ! आगमी काव्यिक उचाइको लागि।